May 2020 - UpdateNew
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် …၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း
May 31, 2020 UpdateNew 0
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် …၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသော ဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း ။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) […]
ယနေ့ မေလ (၃၁) ရက်နေ့ ည(၇:၀၀) နာရီအချိန် မိုးလေဝသသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ယနေ့ မေလ (၃၁) ရက်နေ့ ည(၇:၀၀) နာရီအချိန် မိုးလေဝသသတင်း ထုတ်ပြန်ချက် နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၃၁)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အနည်းငယ်မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ […]
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ စနေ သားသမီးကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင် … စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ […]
ဆိုင်ကယ်စီးနင်း မောင်းနှင်သူများ သိရှိစေရန်
ဆိုင်ကယ်စီးနင်း မောင်းနှင်သူများ သိရှိစေရန် ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က) ။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်= ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = […]
မျှစ်ကိုကြိုက်လို့သာ စားနေတာ အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုပြီး စားဖြစ်အောင်စားရတော့မယ် . . .
မျှစ်အကြောင်းကို မသိပဲ ကြိုက်လို့သာ စားနေတာ..အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုစားတော့မယ်…ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့် သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
အခုခေတ်လူငယ်တွေ မသိတော့တဲ့ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာထည့်သွင်းခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
အခုခေတ်လူငယ်တွေ မသိတော့တဲ့ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာထည့်သွင်းခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာထည့်သွင်းခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ ဘာလို့ထည့်သွင်းထားတာတုန်း၊ တချို့ လည်းပဲစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမှာ၊ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်၊ ဌာပနာဆိုတာ ထည့်သွင်းတာ၊ ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်၊ အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စဘုရားထဲမှာ ထည့်ကြတာတုန်း၊ နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ […]
သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင ခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု..
သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင ခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု.. ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခု…ဤပုံကိုကြည့်ပါ…တန်ဖိုးသိသူတိုင်း မြင်နိုင်ပါသည်။ သွေးသည်အသက် အသက်သည်သွေး မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှ ကျေးဇူးတရား သိတက်ပုံကိုပြသလိုက်သည်မှာ သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက် အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ။ ဆင်းရဲပေမဲ့ ကျေးဇူးတရားသိတက်လှပေသည်။သွေးတစက်၏တန်ဖိုးကို သိတက်သည့် လူဆင်းရဲ၏ မိသားစုက […]
“မင်္ဂလာပါ” ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းစကားကြောင့် ရေခဲတိုက်အအေးခန်း သေမင်းလက်ကနေ သီသီကလေး လွတ်မြှောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (ဖြစ်ရပ်မှန်) အမေရိကန်နိုင်ငံက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ… သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်။ တံခါးကြီးဟာ […]
အဘမင်းသိင်္ခ ရဲ့ “ထီပေါက်ချင် သူတို့အတွက် ထီလမ်းညွှန်” “ထီပေါက်ချင် သူတို့ အတွက် ထီလမ်းညွှန်” မိတ်ဆွေတွေက ထီပေါက် ဖို့ ကံ ပါမပါ မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဘမင်းသိင်္ခ ပြောသွားဖူး တာကတော့ ထီမထိုးတဲ့သူ ပေါက်ဖို့ကံ မရှိသလောက်ပဲတဲ့။ ထီထိုးထားရင်တော့ ပေါက်ဖို့ကံ တစ်ဝက်တော့ရှိနေပြီတဲ့။ အဲဒီတော့ […]
ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ အလှူတော် ရင်ထဲထိတယ်ဗျာ.. မျက်ရည်တွေလည်ဝဲပါတယ်…
ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ အလှူတော် ရင်ထဲထိတယ်ဗျာ.. မျက်ရည်တွေလည်ဝဲပါတယ်… ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ အလှူတော်..ရင်ထဲထိတယ်ဗျာ.. မျက်ရည်တွေလည်ဝဲပါတယ် သူ့ ညီမ ကိုယ့်ညီမ..သူ့ သမီး ကိုယ့် သမီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် တဲ့ အချိန် စိတ်အားငယ်တတ်ပါတယ် ဒီကြားထဲ covid ကာလ ဖြတ်သန်းရတော့ […]
မုဒြာ အကြောင်းရာ သိကောင်းစရာ